Iprofayili Company - Vuka (Tianjin) Steel Sales Co., Ltd
Company esithi: imveliso egqwesileyo zivela SUKUMANI SENTSIMBI
Company Qualification: Le ibambelela zenkampani umgaqo "Umgangatho iyeyona nto iphambili, ulawulo yiyona". Inkampani yethu iye abaqeqeshiweyo ngu ISO9001: 2008, iziqinisekiso API, isiqinisekiso EU, isiqinisekiso CE. China Isiqinisekiso yokuhlela uluntu yolawulo lomgangatho yoqinisekiso nkqubo, China yokuhlela uluntu mveliso ogunyaziswe isatifikethi.
Service Company: Vuka kufakwa imigca ngamazwe eziliqela phambili imveliso kunye nezixhobo ezizodwa pipe sentsimbi anti-umhlwa, eyenza ikwazi kwenziwe iintlobo umbhobho sentsimbi anti-umhlwa zobunjineli ezifana abangatshatanga kunye kabini fusion epoxy kwii (FBE) powder enamathela. Polyethylene kabini (2PE) kunye 3PE ukutyabeka, ezinepolypropylene kabini (2PP) enamathela, 3PP ukutyabeka engaphandle, yaye Ipeyinti sangaphakathi seplastikhi langaphandle. Ukongeza, inkampani nako umbhobho steel ingubo kunye ipeyinti anti-umhlwa kuquka IPN8710 ukutyabeka non-yityhefu kwi umbhobho sentsimbi eludongeni, epoxy amalahle tar ukutyabeka, epoxy resin ukutyabeka, nesamente udaka yethemba.
Ukubeka ngumthengi kuqala kwaye uthatha umgangatho njengoko waba mkhulu umphefumlo wayo. Le nkampani iye abaqeshwe iinjineli abaphezulu kunye namava imveliso nokubalulwa emisiweyo pre-yokuthengisa, ngo-yentengiso kunye neenkonzo emva-kwentengiso. It uwugcinayo i ulawulo umgangatho ngokubanzi kuyo yonke inkqubo ukwenza iimveliso kunye neenkonzo zethu oluthembekileyo ngakumbi, ukwakha intsebenziswano ixesha elide kunye ubudlelwane obuza kulinceda umthengi.